Yenza owakho umdlalo we-arcade game ngenxa yokuphrinta kwe-3D | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Yenza owakho umdlalo we-arcade game ngenxa yokuphrinta kwe-3D
Uma u-nostalgic waleso sikhathi lapho, njengezingane hhayi umncane kangako, singahlangana nabangane bethu kulezo zindawo ezigcwele imishini yemidlalo yamavidiyo, okungenzeka, mhlawumbe hhayi ngobuningi nangokuhlukahluka okunjalo, ongayithola kuzo zonke izinhlobo imigoqo, izindawo zokudlela nezindawo zomphakathi, mhlawumbe manje isikhathi sokuthi uzenzele okwakho Arcade yize ngosayizi kulula kakhulu ukuthutha.
Siyabonga UChristopher Tan, umthandi walolu hlobo lwe-Arcade consoles nefenisha yalo enkulu, izilawuli, ama-levers nama-cores, namuhla unethuba lokuthola izinhlelo zokwakha, njengoba ubona esithombeni esiphezulu phezulu kwalokhu kungenayo, i-console yakho lowo ozobuya ezojabulela iziqu ezidume njengeSuper Pang, iPacman, i-Arkanoid kanye ne-Space Invaders.
UChristopher Tan usikhombisa ukuthi singawakha kanjani umshini we-arcade othakazelisayo futhi oyingqayizivele ngokunyathelisa kwe-3D.
Ukuthola lo mshini we-Arcade, uChristopher Tan osemusha uthathe isinqumo sokusebenzisa i- Ukuphrinta kwe-3D ekwenziweni kwayo. Njengemininingwane, ngikutshele ukuthi ukuze enze le phrojekthi evusa amadlingozi kwakudingeka atshale imali engaphezu kwamahora ayi-100 emsebenzini wokuphrinta ontlantathu, izivivinyo, ukulungiswa kwazo zonke izingcezu noma ukufakwa kwe-Raspberry Pi esetshenziswa njengesisekelo sokufakwa ye-LCD yesikrini lapho uzobuka khona umdlalo wakho noma njengesilawuli sekhiphedi.
Njengoba le nsizwa ephethe ukuthuthukiswa kwale phrojekthi ilandisa, ngokusobala umqondo wokwakha umshini we-Arcade wavela lapho wenziwa ngekhithi yokuphrinta ye-3D elula futhi elula. Sikhuluma ngephrinta encane ye-3D enesisekelo esamvumela, ikakhulukazi, ukudala izingcezu ezinobukhulu obukhulu obungu-22 x 22, okwamphoqa ukuthi aklame umshini wakhe nge inombolo enkulu yezingxenye ezincane.
Noma kunjalo, njengoba ubona kuvidiyo, umphumela wokugcina umangalisa nje ngoba ukwazile ukuthuthukisa isakhiwo esine-a Isikrini se-intshi se-8 Ngesinqumo esingu-1024 x 768 esihlotshiswe ngesisekelo se-vinyl. Uma unesifiso sokwenza umshini wakho we-Arcade, zitshele ukuthi unazo zonke izinyathelo ukulele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Yenza owakho umdlalo we-arcade game ngenxa yokuphrinta kwe-3D
Ngizozama ukuphrinta kancane neNgonyama 2, okuyiqembu elihle
inyathi 1973 kusho
Ngokwami, ngithola ukuthi ibhokisi kulula ukwenza ku-DM, i-OSB, i-chipboard, ... Ugcina umsebenzi omningi ngoba ukwenza ukusikwa nokukufaka isihlabathi. Kepha njengombono akukubi ukukwenza ngephrinta ye-3D.
UDairo Joel kusho
Ngalokhu kufanele ube nolwazi oluyisisekelo lwe-elektroniki okungenani?
Phendula uDairo Joel
I-DJI Goggles, izibuko zokundiza ama-drones kumuntu wokuqala
I-Asus Tinker Board iyathengiswa manje